August 23, 2021 779
सन १९९९ डिसेम्बर,२४ क्रिसमस भन्दा पहिले आइसि ८१४ को जहाज ले नेपालको त्रिभुवन विमानस्थल बाट अपरान्न ४ बजे नयाँ दिल्ली का लागि उडान भर्यो । यो उडान मात्रै १ घण्टा बीस मिनेट को थियो ।यस जहाज को गन्तव्य दिल्लीको इन्दिरा गान्धी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट मा थियो।
अपरान्न ४ बजे उडानको सबै तयारी भई सक्दा कप्पेटमा क्याप्टेन देवी सरन पाईलट सिँह र ईन्जिनियर जाकिया तयार अवस्थामा थिए। विमानमा १४८ जना यात्रीहरू थिए ।जहाजमा सवार अधिकांस नेपालमा छुट्टी मनाएर भारत फर्किदै थिए। यो फ्लाईट उनीहरूको जिवनको सबै भन्दा डर`लाग्दो यात्रा हुने वाला थियो।
तर पनि यतिबेला सबैजना निर्धक्क घर पुग्ने आशामा सबैमा खुसि देखिन्थे। केही समयमा आईसी ८१४को जहाज लाई उडानको लागि अनुमति मिल्यो। र यो विमान उड्यो । झ्याल तर्फ बस्ने यात्रीहरू उत्तर तर्फको सेतो हिमाल ,र हरियो पहाड र तराई तर्फको समथल भुमि देख्दा रोमाञ्चित भए ।
जब जहाज नेपालको वायु सीमाबाट भारतको वायु सीमामा प्रवेश गर्यो तब,सबै कन्ट्रोल सिस्टम भारतीय इयर ट्राफिक लाई सुम्पियो ।सायद त्यतिबेला विमान उडान को २० मिनेट बित्दै थियो ।प्लेन अब सामान्य अवस्थामा आकाश मा उडिरहेको थियो ।त्यतिबेला इयर होस्टेज हरु ड्रि|ङ्क सर्भिस गरिरहेका थिए।
जब चिपस्टेबर अनिल शर्मा सर्भिस गरेर बाहिरिँदै थिए ।तब उनको कञ्चडमा एक बन्दु`क धरीले उनीमाथि बन्दुक ताकि धम्काउँदै थियो ।सावधान प्लेन हाम्रो कब्जामा छ।अब अनिल आत्तिँदै कप्पिडको ढोका खोली भित्र छिरे तब उनलाई ठेलेर त्यी बन्दु`क धारीले क्याप्टेन को कञ्चडमा बन्दु`क ताके।
यो प्लेन मा अरुपनि ४-५ जना बन्दु`क धारि थिए ।जसले प्लेन मा सवार अन्य यात्रुहरुलाई कन्ट्रोल गरिरहेका थिए।अर्थात् अब प्लेन हाई`ज्यक भई सकेको थियो।अब उनीहरूले क्याप्टेन र यात्रुहरुलाई नियन्त्रणमा लिए । तब प्लेन को दिशा मोडियो यतिबेला बन्दुक धारी पश्चिम दिशा तिर जहाज लैजान बारम्बार निर्देशन दिईरहेका थिए ।र उनीहरु प्लेन लाई पाकिस्तानको लाहोर लैजान चाहन्थे ।
केही समयमै घर पुग्दै गरेका यात्रीहरू अब अन्जान दिशातर्फ उडिरहेका थिए । त्यति बेला सबैको अनुहारमा डर,त्रास, भयले आतंकित भएको थियो ।क्याप्टेन सरन जसरी पनि आतंक`वादीको कब्जाबाट प्लेनलाई सकुसल ल्याण्डिङ गर्न चाहन्थे। बन्दु`क धारीले प्लेनलाई लाहोरसम्म लैजान दबाब दिई रहँदा जहाजमा इन्धन नभएको बताए ।
बन्दु`कधारीको प्रश्नमा क्याप्टेनले जबाफ दिए। जहाजमा मात्र दिल्लीसम्म पुग्ने इन्धन रहेको छ। आतं`कवादी हरु कुनै पनि हालतमा दिल्ली ल्यान्डिङ गर्न चाहँदैन थिए जब बन्दुक धारीले क्याप्टेन देवि सरनलाई दिल्लीको विकल्पमा अब कहाँ वितरण गर्न सकिन्छ ? भनेर सोध्दा उनले बम्बई या अहमदाबाद सम्म जान सकिने बताए ।
दिल्ली बम्बई अहमदाबाद भन्दा लाहुर नजिकै छ किन त्यहाँ कुन अवतरण गर्न सक्दैन। उनीहरूमाथि सशंकि`त हुँदै थिए सायद क्याप्टेन चलाखी गर्दै छ वास्तविक पनि यही थियो । भारतीय सीमा छोड्न चाहँदैन थिए । यति बेला भारतमा अँध्यारो भई सकेको थियो आईसी ८१४ आफ्नो गन्तव्य भन्दा सयौं माईक टाढा पश्चिममा उडिरहेको थियो।
क्याप्टेन सरनले प्लेन अपह’रण कर्ता को कब्जा”मा परी रहेकी आक`स्मिक सुचना संकेत दिन ट्रान्स फन्दर थिचिएका थिए।जसबाट भारतीय अधिकारी हरुले जहाज अ`पहरण भएको थाहा पाई सकेका थिए। यो खबर एकैछिनमा भारतीय मिडियामा आ`गो जसरी फैली सकेको थियो ।अब अन्ध`कार आकाशमा आ`तंकवादी हरु र विमान चालकहरु बिच चर्का`चर्की भयो ।
हाइज्य`करहरु विमानलाई लाहोर पुर्या`उनु पर्ने अडानमा थिए भने क्याप्टेन र ग्रुप मेम्बर हरु सीमा छोड्न चाहँदैन थिए।किन कि त्यति`बेला पाकिस्तान र भारत बीच सम्बन्ध कर्गिल यु द्ध चरम बिंदुमा पुगेको थियो उनीहरु आफ्नो घाउ बिर्सी सक्ने अवस्थामा थिए`नन्।यति`बेलै खबर आयो पाकिस्तानले आफ्नो बायु सिमा बन्द गरिदियो अब आतं`कवादी हरुले पुरुष यात्री हरुलाई सिट बाट निकालेर छुट्टै क्याबिनमा लागे ।
र उनीहरूलाई त्यहाँ बाँधिदिए त्यसरी बढिनेमा भारतीय ‘ र’ का अधिकारी अवियस तम्बोर पनि थिए ।उनी संयोगले यो जहाजमा चढ्न पुगेका थिए । त्यसो त नेपालबाटै भारतमा आफ्नी श्रीमतिको उप`चार जाँदै गरेका जनक लाई भने यो घट`ना कसैले र`माइलो गरिरहेको जस्तो लागिरहँदा उनी हाँसी रहेका थिए ।
तर उनको अगाडि मुकुण्डो धारी आतं`कवादी हरु सबैलाई धम्का`ई रहेका थिए।तर केही समय पछि भने वास्तविक थाहा पाउँदा झन्डै उनको होस उडेको थियो । साच्चै प्लेन अपह`रणमा परेको थियो। त्यसो त जहाज मा एक नव जोडी रुबिन कात्यल र रचना कात्याल भर्खर विवाह गरी नेपाल मा हनिमुन मनाएर फर्कदै थिए ।
दु`र्भाग्य आतं`कवादी हरुको नजर रुबिन मा पर्न गयो ।त्यतिबेला क्याप्टेनले विमान को रफ्तार चालीस प्रतिशत भन्दा कम गरिदिएका थिए ।उनीहरूको एउटै उदेश्य थियो कि विमानलाई कुनैपनि हालतमा भारत मा अवतरण गराउने ।तर हा`इज्यकरहरु भारतमा अवतरण गराउन नदिने मनसायमा थिए ।जब क्याप्टेन सरनले यदि विमान अमृत सर मा अवतरण न गरे जहाज को इन्धन सकिएर क्र्या`स हुन सक्छ भन्ने घ`म्की दिए ।
तब हाइ`ज्याकर हरुले एउटा सर्त राख्दै विमान अव`तरण गराउने अनुमति दिए ।अवत`रण गरे लगत्तै जहाज मा इन्धन लोड गरिने छ र पुर्ण गरिने छ यो सर्त क्याप्टेनले माने पछि विमान अमृत सर एरपोर्ट तर्फ बढ्यो केही समय पश्चात विमानले अमृत सर एरपोर्ट मा अव`तरण गर्यो ।
त्यसपछि चाख लाग्दो घट`ना थाहा पाउन यो भिडियो हेर्नुहो`स्
Nextप्रकाश सपुतको ‘कुरा बुझ्न पर्च’ ले २ सातामै पायो यति धेरै भ्युज (भिडियो सहित)
महान श्रीमान भनिने विनोदले के गरे यस्तो ? सेटमै चल्यो रुवाबासी (भिडियो सहित)
इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेल परिवारका साथ मिडियामा,१० बर्षसम्म परिवारलाई भेट्न सकेनन् [भिडियो सहित]